अर्जेन्टिनाका स्टार स्ट्राइकर मेसीमाथि दबाब - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ९ असार २०७५, शनिबार ०४:५४ |
काठमाडौं । पूर्वसहकर्मी सेस फाब्रिगास भन्छन्, ‘अर्जेन्टिनाले अर्काको विरुद्ध होइन, आफ्नै विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेझैँ लाग्छ । मेसीलाई टिमले बुझ्नुपर्छ, जसको अभाव देखिएको छ ।
क्रोएसियाविरुद्धको खेल सुरु हुनुअघि अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसी टाउकोमा हात राख्दै आँखा चिम्लिएर गुमेको आत्मविश्वास बटुल्न खोजिरहेका थिए । सो तस्बिरले देखाउँछ, मेसी कति दबाबमा छन् । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिका खबर छ ।
क्रोएसियाविरुद्ध खेल्नुअघि मेसी कति दबाबमा थिए भन्ने स्पष्ट छ । अन्ततः अर्जेन्टिनाका लागि यो घातक सावित भयो । र, अब प्रश्न उठेको छ, यति धेरै दबाब कुनै खेलाडीका लागि जायज हो?
रोनाल्डोद्वारा पनि दबाब
बार्सिलोना स्टार मेसीमाथि समकक्षी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पनि दबाब बढाइरहेका छन् । चालू विश्वकपमा पोर्चुगलका स्ट्राइकर रोनाल्डोले २ खेलमा ४ गोल गरिसकेका छन् । रोनाल्डोले पोर्चुगललाई नकआउटनजिक पु-याएका छन् । अझ रोनाल्डोले स्पेनविरुद्ध ह्याट्रिक नै गरे । समकक्षी मेसीको अवस्था फरक छ ।
क्रोएसियाविरुद्ध अप्रत्याशित रूपमा बेहोरेको ३–० को हारले मेसीको टिम अर्जेन्टिनाको नकआउट सम्भावना अरूको हातमा पु-याएको छ । यी सबै घटनाले फेरि पनि एउटा प्रश्न उठाएको छ । अर्जेन्टिनी स्टार मेसीलाई यति बढी दबाब हुनु या गराइनु जायज हो ? अनि यति धेरै निरीह बनेका मेसीलाई मात्र दोष दिएर अर्जेन्टिना र अन्य खेलाडी उम्कन मिल्ला ? तत्कालका लागि उत्तर छैन । किनकि, अर्जेन्टिना प्रशिक्षक साम्पाओलीलाई थाहा छैन, यो उम्दा समयका स्टार खेलाडीलाई कसरी परिचालन गर्ने ?
मेसीका बार्सिलोनाका पूर्वसमकक्षी सेस फाब्रिगास अर्जेन्टिनी टिममा पर्याप्त स्टार खेलाडी भए पनि टिम टुटिसकेको मान्छन् । फाब्रिगास भन्छन्, ‘अर्जेन्टिनाले अर्काको विरुद्ध होइन, आफ्नै विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेझैँ लाग्छ ।’ उनले भने, ‘मेसी महान् हुन्, तर उनलाई टिमले बुझ्नुपर्छ, जसको अभाव देखिएको छ ।’ सहज खेल्नका लागि कसैले मेसीलाई राम्रो सहयोग गर्नैपर्छ । कतिपयलाई मेसीलाई एक्लै बनाइएको आरोप लाग्ने गर्छ । फाग्रिगास भन्छन्, ‘मेसी स्कोरर हुन्, उनलाई खेल्ने मौका दिनुपर्छ । तर, त्यस्तो पटक्कै देखिँदैन ।’
४४ करोड समर्थकको विश्वास
अर्जेन्टिनी स्टार मेसीमाथि ४४ करोड समर्थकको विश्वास अडिएको थियो । क्रोएसियाविरुद्ध मेसीमाथि गरिएको ठूलो अपेक्षामा कति दबाब थियो भन्ने कुरा उनले आँखा बन्द गरेर महसुस गरिरहेका थिए । सर्वकालीन खेलाडीमा पाँचपटक विश्वउत्कृष्ट खेलाडी बनेका मेसीले अर्जेन्टिनालाई अघिल्लो विश्वकपमा फाइनलमा पु-याए । उनले उपाधि दिलाउन सकेनन् । त्यसपछि कोपा अमेरिकाको लगातार दुई फाइनल अर्जेन्टिनाले गुमायो । त्यसैले मेसी देशको जर्सीमा धेरैपटक टुटिसकेका छन् । यसपटक उनी जे नहोस् भन्ने चाहिरहेका छन्, त्यही भइरहेको छ । यो विश्वकपपछि सम्भवतः मेसी अब राष्ट्रिय जर्सीमा रहनेछैनन् ।
चालू विश्वकपमा पोर्चुगलका स्ट्राइकर रोनाल्डोले २ खेलमा ४ गोल गरिसकेका छन् । रोनाल्डोले पोर्चुगललाई नकआउटनजिक पु-याएका छन् । अझ रोनाल्डोले स्पेनविरुद्ध ह्याट्रिक नै गरे । समकक्षी मेसीको अवस्था फरक छ । क्रोएसियाविरुद्ध अप्रत्याशित रूपमा बेहोरेको ३–० को हारले मेसीको टिम अर्जेन्टिनाको नकआउट सम्भावना अरूको हातमा पु-याएको छ ।
Previous‘एसइई’को नतिजा आज सार्वजनिक हुने- हेर्ने कसरी
Nextसरकार विरुद्ध आन्दोलन थाल्ने डाक्टर केसीको चेतावनी
डिभिजन थ्रीमा नेपाल र बर्मुडा भिड्दै
७ कार्तिक २०७१, शुक्रबार १०:२८
यी हुन् जर्मनीले जस्तै लज्जास्पद हार बेहोरेका डिफेण्डिङ च्याम्पियनहरु
१४ असार २०७५, बिहीबार ०४:२५
डेब्यू खेलको १८ सेकेण्डमै गोल
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०१:२१